Wakiillada Beesha Caalamka oo kulamo ka wada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Wakiillada Beesha Caalamka oo kulamo ka wada Muqdisho
Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya, ayaa maanta ilaa caawa waday kulamo siyaasadeed oo ay ku doonayaan in xal loogu helo ismari waaga taagan ee la xiriira ajandaha shir Madaxeedka Qaran ee la qorsheeyay in la qabto.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sii-hayaha xilka Ra’iisul Waasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wakiillada Beesha Caalamka u jooga Soomaaliya, waxaana laga wada hadlay xal u helidda khilaafka ragaadiyay furitaanka shir madaxeeda qaran ee Beesha Calamka qababqaabisay.
Labada dhinac waxa ay isla soo hadal qaadeen in RW qaato doorkiisa ku aaddan arrimaha taagan iyo sidii uu uga shaqeyn lahaa dhammeystirka arrimaha doorashooyinka dalka, si waafaqsan heshiiskii 17-kii September,2020 iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhabo.
Taasi waxa ay sababtay in war ka soo baxay Madaxtooyada, mar kale loogu baaqay Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland in ay ka qeyb galaan shirka wada Tashiga.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay mar kale ugu baaqeysaa madaxda dowlad-goboleedyada ka maqan Shirka Wadatashiga Qaran ee Arrimamaha Doorashooyinku in ay ku soo biiraan, si arrimaha lagu kala duwan yahay loogu xalliyo miiska wada hadalka, dalkana ay uga qabsoonto doorasho daahfuran.” ayaa lagu yiri warka Dowladda.
Dhanka kale Wakiillada Beesha Caalamka ayaa Caawa la kulmay Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada dalka waxaana kulankaas looga hadlay arrimaha doorashooyinka.
Sidoo kale Wakiillada Beesha caalamka waxa ay si gooni ah kulan ula qaateen Madaxweynayaasha maamullada Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, waxaana cadaadis ku saareen in ay shuruudahooda qeyb ka mid ah ka tanaasulaan.